ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ ဘာတွေသင်ယူနိုင်မလဲ? - Chit MayMay
Home Lotaya ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ ဘာတွေသင်ယူနိုင်မလဲ?
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုမှုရမယ်၊ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဘယ်လိုစီမံရမယ်ဆိုတာကို သင်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ သင်ယူနိုင်တဲ့အရာတွေကော စဉ်းစားဖူးပါသလား? ဟုတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ကျွန်မတို့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ချိတ်ဆက်မှုကောင်းအောင် ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အရမ်းကောင်းမွန်သော ဆရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ကလေးတွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ဘာတွေပြန်သင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ပါ
ကလေးငယ်တွေဟာ မနေ့က (သို့) မနက်ဖြန် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး မစိုးရိမ်ကြပါဘူး။ သူတို့အတွက် တည်ရှိသမျှအရာ အားလုံးက ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အနည်းဆုံး ခဏလောက် မေ့ထားဖို့ ကြိုးစားပါ။ မနေ့က ငါဘာလုပ်ခဲ့သင့်တာ (သို့) မနက်ဖြန် ငါဘာပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို မစဉ်းစားဘဲ ယနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပါ။ ကလေးတွေခံစားရတဲ့ ပျော်ရွင်မှုနှင့်အတူ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ပါ။
ကလေးငယ်တွေဟာ အကူအညီတောင်းဖို့ မစိုးရိမ်ကြပါဘူး။ သူတို့က ဒါကို အလွယ်တကူလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အား သင်အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်လဲ?
အခြားလူကို လိုအပ်ခြင်းက ရှက်စရာကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ပခုံးတွေပေါ်မှာ လေးလံနေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့ အချိန်မှာ သတိရလိုက်ပါတယ်။ ကလေးကိုကြည့်ပြီး အကူအညီတောင်းပါ။
၃။ ကစားခြင်းက အချိန်ဖြုန်းခြင်း မဟုတ်ပါ
ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့သင်ယူနိင်တဲ့ နောက်ထပ်အရာတစ်ခုက ကစားခြင်းဟာ အရေးပါတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အပျော်တမ်းလှုပ်ရှားမှုကို ခံစားခြင်းက သင့်ကိုယ်သင် connect လုပ်နိုင်ဖို့၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ပျော်စရာတွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးနှင့်အတူ ကစားခြင်းအချိန်ရဲ့ အားသာချက်ကို ယူဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ ။နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
၄။ သင်ခံစားရတာကို ပြောပါ
သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ရင်တောင်- ကလေးတွေက ရိုးသားပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်ပြောတဲ့အရာတွေသာမက သင်ဘယ်လိုပြောလိုက်သလဲ ဆိုတာကိုပါ အမြဲသတိထားသင့်ပါတယ်၊ သင်ခံစားရတဲ့အရာကို ဖော်ပြဖို့ သင်ယူခြင်းက သင်မစွန့်ပစ်သင့်တဲ့ သင်ခန်းစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သင့်ဝန်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးနှင့်အတူ သင့်ကိုယ်သင် surprise လုပ်ပါ
သင့်ကလေးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကတဆင့် ကမ္ဘာကြီးကို ကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် သက်တံ့တစ်ခုဖြင့် အံ့အားသင့်စေပါ။ လေကိုခံစားပြီး မိုးရေထဲမှာ ရယ်မောပါ။ သင့်ကို ပထမဆုံအကြိမ် ပြုံးအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အံသြစရာကောင်းတဲ့ အသစ်သောအရာတစ်ခုခုလို ဒီနေ့စဉ်အခိုက်အတန့်တွေမှာ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
၆။ ခွင့်လွှတ်တတ်အောင် သင်ယူပါ
ကလေးငယ်တွေမှာ ရန်ငြိုးမရှိကြပါဘူး။ သူတို့က ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေတဲ့အတွက် မနေ့က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို မကျေနပ်တာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေ့ပျောက်သွားတတ်ကြပါတယ်။
သင်ဟာ တူညီသော ထောင်ချောက်ထဲကို ထပ်ခါထပ်ခါ အကျခံသင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သို့သော် နှလုံးသားမှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းက သင့်ကို ကုသပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကို လိုအပ်နေသူကို သင်ကိုယ်တိုင် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။
၇။ ပွေ့ဖက်ပါ၊ အနမ်းပေးပါ၊ ချစ်ပါ
သင့်ခံစားချက်တွေကို ဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့ ၊ သူတို့ကို သင်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ ကလေးငယ်တွေဆီကနေ ကျွန်မတို့ သင်ယူနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ သင်ခန်းစာက အခြားသူအပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖုံးကွယ်မထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဒါကို ခံစားမိရင် ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းခြင်းရဲ့ ကုသနိုင်စွမ်းကို ပြသဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ အခြားသူတွေအား သင်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ပြောပြဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
ကလေးတစ်ယောက်ကို ကြီးလာတဲ့အခါ သူတို့ဘာဖြစ်ချင်သလဲ၊ သူတို့ တတ်နိုင်ရင် ဘာတီထွင်မလဲဆိုတာ မေးဖူးပါသလား? ကလေးငယ်တွေဟာ အိမ်မက်အကြီးကြီးတွေ မက်တာကြောင့် အဖြေတွေက လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ သင့်ကလေးမှာရှိတဲ့ အရာကို ဖမ်းယူပါ။ သင့်စိတ်ကူးတွေကို ပျံသန်းစေပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရရှိဖို့ ကလေးငယ်တွေဆီကနေ သင်ယူခြင်းဟာ ဘဝရဲ့ ကြီးမားသော သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ကစားတဲ့အခါ သူတို့ဟာ စူပါဟီးရိုးတွေ၊ အာကာသယဉ်မှူးတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေအဖြစ် ဟန်ဆောင်ကစားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ကူးယဉ်တိုက်ပွဲအမျိုးမျိုးကို တိုက်ခိုက်ပြီး အမြဲတမ်းထိပ်ဆုံးက ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ပြီး မရှုံးနိမ့်နိုင်သလို ခံစားပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ဒုက္ခတွေနဲ့ မရှုံးနိမ့်ပါစေနဲ့။
၁၀။ ကလေးငယ်တွေဆီကနေ သင်ယူပါ၊ ပိုပြီးရယ်မောပါ
ရယ်မောခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကင်းပြီး အသက်ရှည်စေပါတယ်။ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နေပါ။ ကစားပါ။ ကခုန်ပါ။ သီချင်းအော်ဆိုပါ။ ရယ်မောဖို့ အကြောင်းပြချက်တွေကို ရှာဖွေပြီး သင့်ကလေးတွေလို ကောင်းကျိုးတွေကို ယူပါ။
၁၁။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ရှောင်ပါ
မဖြစ်သေးတဲ့အရာ၊ ဖြစ်ပျက်လာခြင်းမရှိသော အရာနှင့်ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်တာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ ကလေးတွေက ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ကြတာကြောင့် စိတ်မပူကြပါဘူး။ သင့်စိုးရိမ်မှုတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ပါ။
Previous articleသင်သိထားသင့်တဲ့ ကလေးတိုင်းအတွက် ဗီတာမင် စီ
Next articleမိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မကာကွယ်ပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက်